स्लिम बन्ने बहानामा गरिने ७ गल्ती « Kakharaa
स्लिम बन्न कसलाई मन नहोला ? सबै स्लिम र आर्कषक शरीर चाहान्छन् । तर स्लिम बन्न सजिलो भने छैन । अझ स्लिम बन्ने बहानामा निम्न गल्ती गर्नु हुँदैन ।
धेरै चिया पिउनेलाई खुसीको खबर
के तपाईं पनि त्यस्तै एक व्यक्ति हो, जसलाई चिया नभइ हुँदैन ? अर्थात् चिया धेरै